Shahaadada Ganacsiga Dibedda iyo Saadka ee Turkiga ayaa Bilaabmay | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShahaadada Ganacsiga Ganacsiga Dibadda iyo Sayniska ayaa la bilaabay
28 / 06 / 2016 GUUD, TURKEY
Up Certification Dibedda, Ganacsiga iyo Logistics Sector Study Start: Turkey ee Midowga Yurub (EU) nidaamka cusub bilaabay of xirfad jira geedi socodka isdhexgalka si loo hubiyo in waafaqsanaanta heerarka xirfad iyo aqoon caalami ah sii xawaare buuxa.
Midowga Yurub Turkiga (EU) bilaabay hannaanka cusub ee shaqooyinka jira geedi socodka qabsashada si loo hubiyo in waafaqsanaanta heerarka xirfad iyo aqoon caalami ah la sii galo xawaare sarre. Xaaladdan, Mersin Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (MTSO) waxay bilaabeen inay shaqeeyaan si ay u siiyaan shahaadada xirfadeed ee ganacsiga iyo qaybaha sahayda.
Marka la eego warbixinta ay soo saartay MTSO, marxaladda koowaad, fikradaha wakiillada qaybaha ayaa la qaadaa iyo shahaadooyinka xirfadeed waxaa lagu go'aamiyaa qaybta ganacsiga iyo sahayda. baaritaan la aqoonsan yahay oo xaaladda hadda jirta ee waaxda ganacsiga shisheeye iyo logistics dalka Turkiga oo uu leeyahay xarunta shahaado lahayn. Marka shaqada la dhamaystiro June 2017 MTSO, imtixaanka imtixaanka iyo shahaado la aqoonsan yahay oo noqon doono ugu horeeyay ee xarunta ganacsiga shisheeye iyo saadka ee Turkey iyo Xarunta Certification.
Barnaamijka 'VOC Test Centre-II', Barnaamijka Horumarinta Shaqaalaha ee Horumarinta Shaqaalaha, waxaa loo sameeyey habeyn si loo diyaariyo shahaadooyin xirfadeed oo loogu talagalay Maamulaha Ganacsiga Dibadda iyo Maamulayaasha Hawlaha Qaab-dhismeedka 'MTSO Shaqaaleynta Xarunta Qalinjabinta iyo Hawl-galinta Shaqaalaha' oo ay soo bandhigtay MTSO Mashruuca Mashruuca oo ay ansixisay Midowga Yurub. Wareegga aqoon-is-weydaarsiga, la-taliyayaal khabiir ah oo la yimid wakiilada qaybta ayaa u shaqeeyay sidii mooraalayaal ah daraasadda aqooneed ee xirfadeed si loogu diyaar garoobo maamulayaasha hawlaha sahayda iyo shaqaalaha ganacsiga dibadda. Dhamaadka toddobaad ee daraasaadka, Maareeyaha Hawlgallada Suuqyadda (heerka 6), Sarkaalka Ganacsiga Dibadda (heerka 5), Mas'uuliyadda Sayniska (Sayniska 5), Shaqaalaha Ganacsiga Dibadda (Heer 4), Khabiirka Xidhiidhka Caalamiga (Heer 6), 5 iyo a heerarka xirfadeed ee qaranka ayaa la go'aamin doonaa.
Aqoonta loo leeyahay in si wadajir ah loola shaqeeyo wakiillada qaybta ayaa laysku waafajin doonaa la-taliyayaasha waxayna diyaariyaan qaabka ay codsatay Hay'adda Xirfadaha Takhasuska (VQA) waxaana loo gudbiyay ogolaanshaha VQA. Daraasada ka dib, MTSO waxay heli doontaa Aqoonsiga Shahaadada Aqoonsiga Shaqaalaha Tansaaniya 17024 ee ganacsiga ajnabiga ah iyo sahayda. Sidoo kale, Aqoonsiga Hay'adda Takhasuska Xirfadaha waxaa lagu buuxin doonaa koobabahan. Adeegyadan waxaa ka dib, MTSO ee Turkey si ay uga jawaabaan dhammaan codsiyada ka yimaada dadweynaha.
Mersin Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
RayHaber 28.06.2016 Warbixinta Shirka
Ku-beddelida Habka Turkiga